လိုချင်သော Serials တွေကို အတိအကျ ရယူခြင်း... - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
လိုချင်သော Serials တွေကို အတိအကျ ရယူခြင်း...
ပို့စ် 8 ခုအတွက် 79 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Software တွေရဲ့ Serials Code တွေကို အတိအကျ ရှာလို့ရပါတယ်.
အရင် ဆုံး Google Search ကို အရင်ဖွင့်ပြီး....
"Product Name" 94FBR ဟုတ်ရိုက်ထည့်ပြီး Search ကို နှိပ်ပြီး ရှာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...
product Name ဆိုတဲ့နေရာမှာ ကိုယ်ရှာချင်တဲ့ software နာမည်..
ဥပမာ. "Photoshop 7" 94FBR
"Nero Burning Rom 6" 94FBR
..::: ƒlash XP :::..
အောက်ပါအသင်းဝင် 48 ဦးတို့မှ နေရှိန်းဦး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုစိုင်းစိုင်း, ကိုထင်, ဆန်းမောင်, မိုးပြာပြာ, မီ:ငှက်, လင်းထိန်, လူပျင်း, လူမုန်း, လွတ်လပ်, ဝင်းအောင်, သက်နိုင်, သူသူလေး, ဟိန်းဟိန်းမြတ်, အပယ်ခံ, အိုင်ဗန်ဟိုး, ကျော်ထက်ချိန်, ဇော်ရဲပိုင်, မောင်ထက်, လေပြေညင်း, သောကမဲ့မိုးတိမ်, ငြိမ်းချမ်း, နိုးတူး, agzaya007, always528, aung zaw htike, AZM, Cupidchan, Ei Ei, JiaoZu, juwathan, kankoung, khunsoemoethu, kwarsi, lamin.pzl, lan kyout, linthuraaung, lu soe, maJunior, mercury, myo20089, nyi nge, peacelover, phoetharlay, tapaung, thein zaw min, thura.it, yelinoo, zo
Find More Posts by နေရှိန်းဦး
17-06-2008, 12:12 AM
ပြန်စာ - လိုချင်သော Serials တွေကို အတိအကျ ရယူခြƚ
ကျေးဇူးအများ ကြီးတင်ပါတယ် ....... နောင်လည်းသိတာလေးတွေ တင်ပေးပါဦးဗျာ.........
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ shadeboy အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
လင်းထိန်, linthuraaung, tapaung
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ kthak အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
လင်းထိန်, khaing king
Find More Posts by kthak
သိတာလေးတော့နည်းနည်းဝင်ပြောကြည့်ဦးမယ်...serials နဲ့ key တော်တော်များများကိုရှာလို့ရတယ်..ဥပမာ
PcTools Registry Mechanic v7.0.0.1010 ကိုအဲဒီကကျွှန်တော်ယူလိုက်တာ..လုပ်ကြည့်ကြ..
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ mmzaww အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မီ:ငှက်, လင်းထိန်, ဝင်းအောင်, ကျော်ထက်ချိန်, ဇော်ရဲပိုင်, နိုးတူး, AZM, linthuraaung
ပို့စ်7ခုအတွက် 35 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
Originally Posted by နေရှိန်းဦး
တစ်ခါတုန်းက သူရဲကောင်း အိုင်ဗန်ဟိုး
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ အိုင်ဗန်ဟိုး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မီ:ငှက်, လင်းထိန်, linthuraaung
Find More Posts by အိုင်ဗန်ဟိုး
28-12-2008, 12:41 AM
ကျွန်တော် သိတဲ့ website လေး တစ်ခု တင်ပြပါစေ/
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ mgkyaw အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ချစ်သတိ, ဆန်းမောင်, လင်းထိန်, လေပြေညင်း, AZM, kwarsi, lamin.pzl, phoetharlay, phyomyintthein
Find More Posts by mgkyaw
Serials,Crack ဖိုင်များလိုနေသူများအတွက် http://www.serials.be ကအသုံးတည့်မယ်ထင်ပါတယ်ဗျာ။
အသုံးပြုရာမှာလည်း လွယ်တယ်လေ Serials.BE search:မှာ လိုချင်တဲ့ Software အမည်လေးကို ရိုက်ထည့်ပြီး ကီးရှာလိုက်ရုံဘဲ။ Please, type the verification number: ကိုတော့မှန်အောင်ရေးထည့်ဘို့လိုမယ်နော်။ Crack ဖိုင်တွေလည်း ရှာလိုအဆင်ပြေပါတယ်။ သိပြီးသားဆိုရင်တော့ မျက်စိမှိ်တ်နေပေးပေါ့။ ဟဲဟဲ နောက်တာပါဗျာ ........... ချိတ်အဆိုးရဘူးနော်။
Last edited by sanaung; 05-02-2009 at 07:01 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ sanaung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
လင်းထိန်, linthuraaung, phoetharlay
Find More Posts by sanaung
Serial Key များကို Google မှာ ရှာနည်း
ကျွန်တော်ပြောပြမည့် နည်းက သိပြီးသားဆိုလည်း မသိသေးသူများအတွက်ပါ။
လက်ရှိ ကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ http://www.google.com/ ကို http://www.google.cn လို့ပြောင်းရိုက်လိုက်ပါ။ cn ဆိုတာကတော့ China ကိုပြောတာပါ။ China Google ရဲ SERCH BOX မှာ KEY သိလိုတဲ့ SOFTWARE အမည်ကို ရိုက်ထည့်ပေါ့။( SOFTWARE အမည်ကို ရိုက်ရာမှာ Power DVD 8 sn) အစ စာလုံးတွေကို အကြီးနဲရေးမှ ရမယ်နော် sn ကိုတော့ အသေးနဲ့ရေးမှ ရမယ်နော်။ ပြီးရင်တော့ SERCH ပေါ့။ လိပ်စာများနဲ့ အတူ Serial များကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် OK ပြီပေါ့။ ကျွန်တော်ရှာထားတာ နမူနာပြမယ်
Microsoft Office 2007 官方简体中文版免费的序列号？_系统优化/辅助 ...2008年12月17日 ... 可以使用的SN：DBXYD-TF477-46YM4-W74MH-6YDQ8 ... 查看同主题问题： office 免费游戏 office 2007 microsoft office 免费杀毒. 其它回答(共5条) ...
k.pconline.com.cn/question/779180.html - 19k - 网页快照 - 类似网页
အောက်ပါအသင်းဝင် 11 ဦးတို့မှ sanaung အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆန်းမောင်, လင်းထိန်, သက်နိုင်, နိုးတူး, AZM, chitnyimalay, linthuraaung, maJunior, phyomyintthein, thein zaw min, yelinoo
25-02-2009, 03:51 PM
ပို့စ် 1 ခုအတွက် 8 ဦးမှကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော် သိတဲ့ website လေး တစ်ခု တင်ပြပါရစေ
Last edited by jaukjet; 25-02-2009 at 03:52 PM..
အောက်ပါအသင်းဝင် 8 ဦးတို့မှ jaukjet အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆန်းမောင်, မင်းသီဟထွန်း, လင်းထိန်, သက်နိုင်, ကျော်ထက်ချိန်, AZM, phyomyintthein, yelinoo
Find More Posts by jaukjet
တည်နေရာ: lot no 2271 kg baru , sg buloh .47000 selangor d/e malaysia
ပို့စ် 14 ခုအတွက် 24 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ခုလိုပြောပြပေး တဲ့ အတွက် အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါ၏ မသိတာလေးများ ရှိခဲ့ရင်ဖြစ်မေးပါရစေ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ centurymg အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by centurymg
ပို့စ် 30 ခုအတွက် 113 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
အချိန်အခါလေးကလည်းသင့်နေတယ်...အရင်တုန်းက....မြန်မာမိသားစုထဲက...ရတာလေးပါ...အခု Mediafire ကနေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်....
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ Nayzawchan အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by Nayzawchan
serials နှင့် Key မှန်သမျှ အကုန်ရ
ဒီနော် ဆိုက်လေးတစ်ခုနှင့် မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ .. တစ်ခုတော့ကြိုပြောထားချင်ပါတယ် .. အဲ့ဒီ့ဆိုက်လေးကို မိတ်မဆက်ပေးခင် ကျွန်တော်စဉ်းစားပါသေးတယ် .. အရမ်းအကျိုးရှိတဲ့ဆိုက်လေးဖြစ်လို့ ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်တာပါ ... ကျွန်တော်လဲ လိုအပ်ရင် အဲ့ဒီ့ဆိုက်လေးကပဲ သွားသွားယူနေရတာပါ .. တစ်ခုတော့ရှိပါတယ် .. ဆိုက်လေးရဲ့အပေါ်မှာ animation ပုံလေးတွေတော့ တင်ထားတာတော့ ဆိုးတယ်ဗျ .. ဒါပေမယ့် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ ကျွန်တော်တို့အတွက် အကျိုးရှိဖို့က အဓိက မဟုတ်လား .. မယုံရင် ကြိုက်တဲ့ Serials number တွေကို ရှာကြည့်ပါ ..
အပေါ်က အကွက်လေးမှာ ကိုလိုချင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲနာမည်ကို ရိုက်ထည့်လိုက်ပါ .. ပြီးတာနဲ့ search ဆိုတာလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ .. သူချပေးပါလိမ့်မယ် version အလိုက် ကိုလိုချင်တဲ့ နာမည်နဲ့ serials number ကို နှိပ်ပြီးယူလိုက်ယုံပါပဲ ...
Last edited by ညီနေမင်း; 06-06-2009 at 11:52 AM..
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ ညီနေမင်း အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆန်းမောင်, လင်းထိန်, ဇော်ရဲပိုင်, ah nai, decemberdec, juwathan, lamin.pzl, linthuraaung, thura.it
ifite.it ဖြင့် ဒေါင်းလို့ ရလား
ကိုကျွန်တော် မသုံးတတ်ဘူး.... ကျွန်တော်က ifite.it တစ်ခုပဲ ဒေါင်းတတ်တာ ....... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
15-07-2009, 10:51 PM
Originally Posted by minwain
ဒေါင်းလော့ချဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ http://serials.ws ဒီလင့်ကို နှိပ်ပြီး သွားရှာနိုင်ပါတယ်။
စပိုင်တွေရှိတတ်လို့ အကောင်တော့ သတိထားပေါ့နော် ....၀င်ပြီးရင် စက်ကို Scan တော့ ပြန်ဖတ်ပါ။
ဒီလင့်ခ် မျာလည်း ရှာတဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးတင်ထားပါတယ်။
Last edited by ဖြိုးယံလေး; 15-07-2009 at 11:00 PM..
လင်းထိန်, သက်နိုင်, linthuraaung, tu tu
ပို့စ် 16 ခုအတွက် 52 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
ကျွန်တော်က malwarebytes trillvertion ကိုသုံးနေရပါတယ်1.60.1800 ပါ
product Id&product name တောင်းနေပါတယ်
သိကြသောကိုကို မမ တို.ကူညီကြပါနော်
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ nandarnaing007@gmail.com အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by nandarnaing007@gmail.com
14-02-2012, 08:13 PM
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ aungpyaesonetoe အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဒီလို နည်းပညာဗဟုသုတများ ဖြန်.ဝေပေးတဲ့ ညီအစ်ကို၊ မောင်နှမများကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။
နောက်နောင်မှာလည်း ဒီထက်မက နောက်ထပ်အများကြီး ပြန်လည်ဖြန်.ဝေနိုင်ပါစေ
Find More Posts by saiemone